समाचार Archives - Online Tamang
गत जेठ १३ गते फेवातालमा वेपत्ता रामेछाप घर भई भक्तपुर बस्ने सुप्रिल लामा १० दिनपछि मृतावस्थामा भेटिएका छन् । जेठ १३ गते दिउँसो साढे तीन बजेतिर आफ्ना चार साथीहरुसँगै फेवातालमा आफै डुंगा चलाएर घुमिरहेका बेला चट्याङ पर्दा सुप्रिल तालको बीच भागमै डुबेका थिए । ﻿ उनको शव झण्डै कुहिन लागिसकेको अवस्थामा बुधबार मध्यान्ह फेला परेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नविन कार्कीले जानकारी दिए । सुप्रिलका हजुरबुबा एक हप्तासम्म केहि पत्तो नलागेपछि पोखराबाट फर्केका थिए । डुबेकै दिनदेखि गोताखोरको टोलीले लगातार खोजी कार्य जारी राखेको थियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको टोली र नेपाल आर्मी खोजीमा जुटेको थियो । फेवातालको शिर भागतिर गहिरो भागमा डुबेको कारण शव उत्रिन लामो समय लागेको हुन सक्ने डिएसपी कार्कीले बताए । भक्तपुरबाट पाँच जना साथीको समूह जेठ १२ गते पोखरा घुम्न आएका थिए ।
गत मे ६ मा बैंकक सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक चिनियाँ महिला अपहरणमा परेकी थिइन्। उनको नाम जीनकाई चेन हो। ३९ वर्षीया ती महिलालाई अपहरणकारीले १३ दिनपछि मात्रै छाडेका थिए। सुरुमा आफ्नो श्रीमतीलाई छोड्न भनी श्रीमानले अपहरणकारीलाई एक करोड भाट दिए तर त्यतिले पनि नमानेपछि अपहरणकारीले थप ५० लाख भाट माग गरे। अपहरणकारीले थप पैसा माग गरेपछि मात्रै श्रीमानले यस घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए। तर ५० लाख भाट माग गरेपछि अपहरणकारी मे १८ मा ती महिलालाई रिहाई गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ। अपहरण गर्नेमा एक थाई महिला र चार चिनियाँ पुरुष रहेका छन्। एक थाई प्रहरीका अनुसार ती पाँचै जनाको पहिचान भइसकेको र उनीहरुलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी भइसकेको छ। साथै ती महिलालाई अपहरण गरिएको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा हङकङबाट आएकी ती चिनियाँ महिलालाई सुव
काभ्रेपलाञ्चोकको साँगाबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको टिपरको ठक्करबाट बुधबार तीन जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ । बा. ३ ख ६६७४ नम्बरको ट्रिपरले बा. ५६ प १२२७ नम्बरको स्कुटरलाई भक्तपुरको पलाँसेमा ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार तीन जनाको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो पनि पद्नुहोस दुधे छोरी छोडेर बुहारी बेपत्ता, सासूससुरा भन्छन् : बुहारीलाई फोनले बिगार्‍याे देब पचभैया/उज्यालो । पाल्पा, जेठ ९ – पाल्पाको तानसेन नगरपालिका –१२, बौघापोखराथोककी तुलसा विक दुई वर्षकी छोरी घरमै छोडेर वेपत्ता भएकी छन् । परदेशमा रहेका श्रीमान् नेपाल आउने थाहा पाएपछि तुलसा छोरीलाई घरमै छोडेर हिँडेकी ससुरा दलबहादुर विकले जानकारी दिए । २० वर्षीया तुलसा गएको आइतबारदेखि पैसा र गरगहना लिएर सम्पर्कविहीन भएको भन्दै दलबहादुरले जिल्ला प्र
काठमाडौं, ९ जेठ । बहुचर्चित ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुख्य कारोबारी मानिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । उनैले हराएको सुन खोज्न भरिया सुनम शाक्यलाई यातना दिएको भिडियो रेकर्ड हेरेपछि हाल फरार रहेका बाजेको सेकुवाका सञ्चालक चेतन भण्डारी र उनकी पतनीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने तयारी शुरु भएको छ । चूडामणिचाहिँ केही दिनयता भारतीय भूमिबाट प्रहरी सम्पर्कमा आई इन्काउन्टरमा नपर्ने ग्यारेन्टीसहित हात उठाएका हुन् । उनले सम्पर्कमा आएका प्रहरीसँग हाल पक्राउ परी मोरङ जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेका आरोपी बारे सुनुवाई भएलगत्तै आत्मसमर्पण गर्ने सोँच सुनाएका थिए । तर, भेटिसकेका अभियुक्र प्रहरीले किन छाड्थ्यो र ? प्रहरीले अप्ठेरा मामिलाका कसुरदार पक्राउ गर्दा प्रमाणको अभाव हुने, उच्च राजनीतिक दबाब आउने र थेग्न नसकिने दबाब झेल्नुको सट्टा जवाफी कारबाहीमा मारिएको
प्रेम सुनार गुल्मी–गुल्मीका एक युवाको दुवईमा सडक दुर्घटना परी ज्यान गएको खबर प्राप्त भएको छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्वर २, दर्लिङ्ग ठुल्ढुङ्गे गाउँका३० वर्षीय खड्गबहादुर विकको ज्यान गएको हो । गत शुक्रबार दुवईको सडकमा बाटो काट्ने क्रममा गाडीले हानी घटना स्थलमा ज्यान गए पनि परिवारलाई आज मात्र जानकारी दिएको हो । १५ महिनाअघि दुबई उडेका विकको घरमा अहिले एक श्रीमती मात्रै रहेकी छन् । दिदी बहिनीको विवाह भएको र उनका दाजु रुपन्देहीमा बसाई–सराई गरेका छन् । विपन्न परिवारका बिक त्यस अघि मलेसियाबाट फर्केका थिए । तीन वर्षअघि उनी र बाग्लुङ्ग जलजलाकी लक्ष्मीसँग प्रेम विवाह भएको थियो । माईती घर पुगेकी उनकी श्रीमती लक्ष्मी यतिवेला मुर्छित छन् उनको शव ल्याउने प्रकृयाका लागि आफुहरु वडामा कागजपत्र तयारी गर्दै रहेको मृतकका भिनाजस रविलाल विकले बताए । स्थानीय समाजसेवी महेन्द्र बिसीका अनुसार उन
२० वैशाख काठमाडौं । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुन तस्करीको सुरुवात कर्ता पछिल्लो पुस्ताका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ मात्र होइनन् । पञ्चायतकालदेखि नै विमानस्थलबाट सुन तस्करीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । र, यसमा दरबार नजिकका मानिसहरुले सुन तस्करीको तरिका नयाँपुस्ताका तस्करलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पाइएको छ । एयरपोर्टको सुन तस्करीमा पञ्चायतकालभरि दरबारियाहरुको भूमिगत गिरोह सक्रिय थियो । त्यसपछि कम्युनिष्टहरुको नाम पनि कहिलेकाहीँ मुछियो । प्रहरी र कर्मचारीको संलग्नता त सधैं नै रहँदै आएको छ, यसमा नयाँ पुस्ताका डन गोरेहरु संगठित रुपमा जोडिए । एयरपोर्ट भन्सारमा जागिर खान मरिहत्ते गर्ने निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुले एकाध वर्षमै अकूत सम्पत्ति कमाउने गरेका छन् । उनीहरुको सम्पत्तिमाथि राज्यले अहिलेसम्म जाँचबुझ गरेको छैन । पञ्चायतकालीन तस्करको वयान राप्रपाका नेतासमेत रहे
दुखद खबर भर्खरै आयो धरान तरहराबाट अर्को ठुलो दुर्घटना
ईटहरी । उदयपुरको गाईघाटबाट सुनसरीको धरानतर्फ जाँदै गरेको बस सुनसरीको तरहरास्थित पानीपियामा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना बढी घाईते भएका छन । तिब्र गतिका कारण ना४ ख ४२५८ बस दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाइको छ । दुर्घटनाको बिस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । घाईतेहरूलाइ वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएकाे छ । मृतकको पहिचान खुलेको छैन ।तिब्र गतिका कारण ना४ ख ४२५८ बस दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाइको छ । यो पनि पद्नुहोस गोरेको बयान : ‘म भन्दा माथि काम गर्ने अरु नै छन्, एसएसपी श्याम खत्रीलाई पक्रनुस्, सबै खुल्छ’ काठमाडौँ । सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका मुख्य नाइके भनिएका चुँडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले बाहिर आए जस्तो आफू ठुलो सुन तस्कर नभएको बताएका छन्। मङ्गलवार सिआइबी टोलीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्ने अघि लिएको बयानमा आफू भन्दा ठुलो सुन तस्कर अरू
‘विगत अढाई वर्षदेखि सबै काम सनमले गथ्र्यो । सामान हरायो भन्ने सुनेँ, त्यसबेला म कोलकतामा थिएँ । त्यसपछि विमानस्थलका स्टाफलाई सोधियो । सुन खोज्न हिँडियो । खोज्दै जाँदा म भएको भए सनम मर्दैनथ्यो होला । खानपिन झैझगडा भइरहन्थ्यो । सनम मर्ने बेलामा गाडीमा राखेर उनीहरुलाई घरपरिवार र हस्पिटलमा छाड्ने तयारी थियो । हामी वर थियौं । अन्तिममा सनम मर्यो भन्ने खबर आयो । त्यसपछि हामी आत्तियौं,’ पक्राउ पर्नुअघि चूडामणि उप्रेती अर्थात् गोरेले यस्तो भनेको भिडियो सन्देश सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा गोरेले सनमको बारेमा निकै कुरा बताएका छन् । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले बनाएको विशेष छानबिन समितिले मंगलबार बिहान पक्राउ गरेपछि पनि गोरेले सनमसँगको आफ्नो सम्बन्धका बारेमा बयान दिएका छन् । मंगलबार नै समितिले गोरेलाई मोरङ प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । गोरेले अढाई वर्षदेखि सनमले नै आफ्नो काममा सहयोग गरेको बताएका छन्
भर्खरै अायो दुखद खबर बस दुर्घटना एकको मृत्यु, २२ बढी घाईते (तस्विरहरू सहित पुरा बिवरण हेर्नुहोस्)
ईटहरी । उदयपुरको गाईघाटबाट सुनसरीको धरानतर्फ जाँदै गरेको बस सुनसरीको तरहरास्थित पानीपियामा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने २२जना बढी घाईते भएका छन । तिब्र गतिका कारण ना४ ख ४२५८ बस दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाइको छ । दुर्घटनाको बिस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । घाईतेहरूलाइ वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएकाे छ । मृतकको पहिचान खुलेको छैन । यो पनि पद्नुहोस मुख्यमन्त्री राउतले मनपरि गरेको भन्दै प्रदेश दुईको सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपाले फिर्ता लिने काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश दुईको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बढ्दो तनावकाबीच नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको हो । तत्कालिन एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले सरकारको रवैयाका कारण समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो
-अब कैदीबन्दीले कारागारभित्रै यौनसम्पर्क गर्न पाउने नियम (2)